Maitiro Ekusarudza Inobatsira Mapepa Ekudonhedza? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Academy Tsvaga Zvinokunda Zvigadzirwa Sarudza Niches
Maitiro Ekusarudza Inobatsira Niches Ye Kudonhedza?
Kudonhedza ndeye inovimbisa kwazvo bhizinesi modhi uye musika wekudonha wakakwikwidza zvakanyanya. Zvinotonyanya kuvimbisa kana iwe ukasarudza iyo inobatsira niches yekudonhedza kuitira kuti iwe ugone kuwana yakawanda kutengesa. Iyi niche yaunosarudza inogona kuita kana kutyora rako rekudonha bhizinesi. Saka maitiro ekusarudza anobatsira niches ekudonhedza? Pane mimwe mirairo yaunogona kureva.
Tsvaga Akakurumbira Niches
Unogona kutanga nekutarisa maAmazon anotengesa zvakanyanya kana maAmazon akashuvira zvakanyanya zvinyorwa kana zvimwe zvinyorwa zvepamusoro zvinotengesa zvakanyanya kuti uwane niches dzakakurumbira. Iwe unogona zvakare kushandisa iyo Trendhunter chishandiso iyo inoshandisa imwe AI mashiripiti kuwana yakakurumbira zvigadzirwa. Uye zvakare, iwe unogona kuramba uchitarisa kune ari kufambisa mapurojekiti paKickstarter kuti uone kuti ndezvipi niches zvinowana kumwe kwakanaka kuteedzera munguva pfupi.
Niche dzakakurumbira dzinogona kuve nyore kana dzakaoma kutengesa. Mukudonhedza, ivo vatambi vakuru ndiyo yakajairwa maitiro-setter. Vanoshandisa mari yakawanda kushambadzira kusimudzira zvigadzirwa, zvichiita kuti mamwe niches afarirwe. Iwo ma micro players anogona kusarudza iwo akafanana niches uye nyore piggyback kufarirwa kweaya maitiro uye tengesa zvigadzirwa zvekudonha. Nekudaro, sezvo zvigadzirwa zvinozivikanwa zvine vatengesi vakawanda kwazvo vari kukwikwidza, zvinogona kukusiya uine shoma shoma purofiti. Unyengeri ndewe kutsvaga niche inozivikanwa yaunogona kuita yakasarudzika kuchitoro chako neimwe nzira, uye uwane nzira yekuve nemakwikwi ekukwikwidzana nevamwe vatengesi zvichibva pamutengo, sarudzo, sarudzo kana kuwanikwa.
Tsvaga Yekuwedzera-inorema Niches
Vatengesi havawanzoita zvakawanda pazvinhu zvikuru-zvetikiti uye pamwe vanongowana mashanu kusvika gumi muzana pazvinhu zvakaita semalaptop neTV. Iko kwavanonyatsoita mari yavo kuri pazvinhu zvekushandisa.
Zvishongedzo zvinonakidzwa nemamaki akakosha uye vatengi vane mutengo mushoma-unonzwisisa nezvavo. Mutengi anogona kutenga kwemavhiki kuti awane dhizaini yepamusoro paTV, asi aisazofunga kaviri nezvekudonhedza $ 30 pane tambo yeHDMI kubva panzvimbo imwechete. Asi zvakadaro pane mukana wakanaka bhizinesi rakagadzira zvakati wandei purofiti pane tambo sezvayakaita pahwindo redenga.
Paunosarudza niche ine zvakawanda zvekushandisa, iwe unozonakidzwa yakanyanya yakanyanya mibairo migero uye vashoma vemitengo-inoteera vatengi.
Tsvaga Niches Zvakaoma Kuwana Kwako
Kana iwe ukatengesa chigadzirwa icho mutengi angave asingawani chakatenderedza, kutendeukira kune ecommerce chikuva ndiyo chete yavo sarudzo. Uye iwe unozokwanisa kuenda pamberi pehuwandu hwakawanda hwevatengi vako sezvavanotsvaga online. Chitoro chako chinogona kupinda mukati uye kutengesa chigadzirwa. Kunyangwe iwe uchinyatsoda chimwe chinhu chakaoma kuwana munharaunda, iwe zvakare unofanirwa kuona kuti pane zvakakwana kudiwa kwechigadzirwa.
Iwe unogona achiri kutengesa pamhepo zvigadzirwa zviripo munharaunda: kana iwe ukawedzera yako pachako kumonyorora kwavari. Semuenzaniso, Zorora ndeye webhusaiti yeecommerce inotengesa masutukesi, asi masutukesi akagadzirwa kusvika pakukwana uye akashongedzerwa nezvinhu izvo mukwende wako wenguva dzose waisazove nawo.
Shandisa Pazvako Zvakaitika
Funga kusarudza niche iyo iwe unayo chaiyo ruzivo mukushandisa. Kana iwe wakashandisa niche, iwe unogona kugovana ruzivo rwako kune vako vatengi. Izvi zvinokupa mukana wekukwikwidza nekuti unogona kutsanangura hunyanzvi hwechigadzirwa uye mashandisiro ayo akasiyana kune vangangove vatengi izvo zvinokubatsira iwe kutengesa chigadzirwa.
Uye kana iwe uine ruzivo rwakawanda mukushambadzira, kunyanya kutaura nyaya, sarudza niches idzo nyaya dzinotarisana newe uye iwe unogona kutaurira zvakanaka kwazvo kune vako vanotarisira vatengi.
Tarisa Google Trends
Unogona kutarisa Google Trends kuti huwandu hwemataipi emigwagwa ane chekuita neniche yako inogadzira kuti uone saizi yemusika: semuenzaniso, vanhu vazhinji vanotsvaga shangu pazvinjini zvekutsvaga seGoogle, asi pamwe havazi vazhinji vachatsvaga tsvuku. shangu dzakakura 8.
Iwe unogona zvakare kutarisa Google Trend nezve mafambiro ezve vanhu kufarira niche yako nekufamba kwenguva kuitira kuti kudiwa kweiyo niche kuve kwemwaka kana kungoita pulse, iyo inoderera nekukurumidza. Zvirinani kudzivirira mwaka kana kushaya maitiro senge niches, sekushandiswa kwechitoro chako kana zvinyorwa zvichazogumira kunguva diki.
Unogona kusarudza niches yakaratidza kugadzikana kana kukura kudiki paGoogle Maitiro.
Semuenzaniso, Fashoni yeVarume inoratidza kugadzikana uko kungangoenderera sezvo iri evergreen niche.
Sarudza Mutengo uye Mari Yekubatsira
Ziva akanakisa emapoinzi emitengo yechinhu chimwe nechimwe chechigadzirwa mune yako niche. Semuenzaniso, t-shirt yekumusoro-soro yakaderedzwa pamadhora makumi mashanu inogamuchirwa asi T-shirt chena yemazuva ese inopfekwa yekuzorora kumba haina. Kuti uwane akanyanya kukodzera mitengo mapoinzi, zvinotora imwe yakadzika-tsvagurudzo.
PaSpocket, iyo yakatarwa mitengo uye nemitengo yakatengeswa yekutengesa inogona kukupa iwe pfungwa yemubhadharo margin. Nekudaro, iwoyo ndiwo mutengo wechigadzirwa kusanganisa mitengo yekutumira uye pamwe netsika. Kana yako purofiti muganho uchiri kukwanisa kutsigirwa mushure mekunge imwe mari yekuwedzera yawedzerwa pamutengo wekutengesa, saka niche yacho yakanaka kuenda. Mufananidzo unotevera unoratidza mari yekuwedzera.
Edza kusarudza niches iwe yaunogona kutengesa ne 30% kana yakawanda margin margin. Izvo zvakanyanya kufarirwa niches, iwe unowedzera mukana wekuti uwane mari shoma nekuti iwe uchafanirwa kuchengetedza yako mitengo yakaderera kuti ugare uchikwikwidza. Nekudaro, pane zvimwe niches izvo zvinokutendera iwe kuti uwane yakanaka purofiti, iwe unongofanirwa kutsvagurudza zvimwe kuti uzviwane uye uzvisarudzire wega kana iyo mariro margin yakakosha.
Find Rrinogoneka Szvinowedzera
Kana zvasvika pakudonhedza niches, iwe unofanirwa kuona kana iwe uchigona kuwana vakavimbika vatengesi veiyo niches yaunosarudza kana kwete. Vatengesi vako vanopa vatengi vako zvigadzirwa uye ivo chikamu chakakosha chedanho rekudonhedza. Iwe unozofanirwa kutanga kutsvaga kwevatsigiri vanogona kuvimbwa uye kuvimbika.
Kuvimbika kunosanganisira zvinhu zvinoverengeka: odha yega yega yemutengesi inonamira panguva imwechete maererano nezvekutakura zvinhu, mutengesi angakurumidze kupindura kana mubvunzo ukabuda, mhindu dzawo dzinoitwa sei- iyi mibvunzo yese inoda iva nemhinduro dzakanaka kuti mutengesi ave akanaka.
Tags cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, kudonhedza niche, Kudonhedza kukunda zvigadzirwa, maitiro ekuwana chigadzirwa chinokunda, maitiro ekuwana zvigadzirwa zvinokunda, kukunda chigadzirwa, kukunda zvigadzirwa
← Zuva reValentine Pfungwa dzePurudzo Yako-pane-inoda Chitoro → Maitiro Ekusarudza Iyo Yakakodzera Kubhadhara Gateway uye Ndeapi Akanaka?